Kedu ihe bụ nlekota oru nkesa? | Omume kacha mma maka nlekota nke sava
Kedu ihe bụ nlekota oru nkesa?
Site na akụrụngwa IT dị mgbagwoju anya na atụmatụ azụmaahịa na-agbanwe agbanwe, ndị otu IT na-adabere na ndị na-enye ọrụ igwe ojii yana ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ebe data na ngwaike. Site na sistemụ echo igwe ojii, ndị otu IT nwere ike ịmepụta na ibuga ụdị akụrụngwa IT ọ bụla. Ndị na-enye ọrụ igwe ojii na-enye ihe dị iche iche na-enyere ndị otu aka ịzụlite na ịzụlite azụmahịa ha. Ndị na-enye ọrụ igwe ojii dị ka Amazon, Microsoft Azure, na Google na-enyere ndị otu IT aka ịbawanye nchekwa ha, ịkparịta ụka n'Ịntanet, sava, na ike nnabata ha site n'inye akụrụngwa dịka ọrụ (IaaS).
Ọ dị mkpa iji nyochaa ihe omume na azụmahịa iji zere ọdịda mgbe ọ na-abịa na ntinye na ịdabere na ya. Na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke sava na-etinyere na igwe ojii, nchekwa na nnweta na-aghọ ihe dị mkpa. Tụkwasị na nke a, ọnụ ọgụgụ nke njedebe njedebe na ngwa igwe ojii nwere ike ịbụ ọnụ ụzọ maka ndị na-awakpo, na-eduga ha imebi nchekwa netwọk. Ya mere, ọ dị mkpa iji nyochaa arụmọrụ netwọkụ na ịdị adị, chekwaa netwọkụ ka ebuli ahụmịhe onye ọrụ, yana nwee oge opekempe.
Ihe ndị dị otú ahụ na-eme ka ọ bụrụ iwu na-enyocha ihe nkesa nke arụnyere na ụlọ ma ọ bụ na igwe ojii. Nleba anya ihe nkesa na-enyere òtù dị iche iche aka idobe sava ahụ. Dabere n'ụdị ihe nkesa ahụ, enwere ike nyochaa ma tụọ metrics dị iche iche nke na-enyere òtù dị iche iche aka ichebe sava site na mmebi nwere ike ime.
Metrics nlekota ihe nkesa dị mkpa
Ebe enwere akụkụ dị iche iche n'ime akụrụngwa IT iji nyochaa, ebe a bụ metric ole na ole iji tụọ mgbe ị na-elele ihe nkesa ahụ.
Ichekwa Nchekwa: Na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke azụmahịa na modul na-ebuga kwa sekọnd ọ bụla, ọ dị mkpa iji jide n'aka na sistemụ ahụ nwere ike CPU zuru oke na ebe nchekwa. Iriri oke nke ebe nchekwa nwere ike imetụta ahụmịhe na arụmọrụ onye ọrụ.
Ndaba: Mgbe ihe nkesa na-emeghị ihe ndị a rịọrọ, ọ na-eduga na ọdịda nke ụfọdụ isi ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ihe nkesa enweghị ike ịnakọta nkọwa ngwaahịa site na nchekwa data, ndị ọrụ agaghị ahụ nkọwa ngwaahịa, nke na-emebi ahụmahụ onye ọrụ.
nchọ: Ọ dị mkpa ịnweta bandwit zuru ezu na ihe nkesa. Site na pinging nkesa, enwere ike tụọ ohere nke sava na oge nzaghachi ya.
Response Oge: Ọ dị mkpa ịnweta nzaghachi ngwa ngwa site na ihe nkesa, karịsịa mgbe ọtụtụ azụmahịa na ịdabere na-eme n'otu oge.
Security: Nnwale na-aga nke ọma ma ọ bụ nke dara ada nwere ike inye nghọta na arụmọrụ sistemụ. Mgbalị abụọ a na-enyere ndị nchịkwa aka ịchekwa usoro ahụ n'ụzọ ka mma.
Omume kacha mma maka nlekota nke sava
Dabere na ihe nkesa igwe ojii na ngwaọrụ nleba anya, usoro nleba anya ihe nkesa dị iche. Dị ka otu nzukọ na-eto eto na ọnụ ọgụgụ nke ntinye na modul na-abawanye, ọ dị mkpa ịtọlite ​​​​ngwọta nlekota nkesa nke na-anakọta data site na njedebe dị iche iche nke igwe ojii. Enwere usoro ise gụnyere na omume nke sava nlekota oru.
1. Agentless Vs. Nleba anya dabere na onye nnọchi anya: Tupu ngwọta nlekota ọ bụla amalite nyochaa usoro na nyochaa metrics, ọ chọrọ nhazi ntọala iji guzobe. Otu n'ime usoro mbụ nke ịhazi usoro ahụ bụ bifurcating ngwaọrụ ndị dabere na ndị nnọchi anya: ngwaọrụ dabere na ngwaọrụ na-enweghị onye nnọchi.
- Nleba anya na-enweghị ọrụ: Nleba anya na-enweghị onye ọrụ kwesịrị ibunye ngwanro ahụ na onye na-anakọta data dịpụrụ adịpụ. Onye na-anakọta data na-ekwurịta okwu na sistemụ ebumnuche na ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche. Enwere ike ịwụnye onye na-anakọta ya na ohere nchịkwa iji nweta sistemu dịpụrụ adịpụ. Nleba anya na-enweghị ọrụ na-abịa na njedebe nke ya dịka ọ bụghị ngwa niile na sistemụ arụmọrụ na-akwado ya.
– Nlebanya dabere na onye nnọchi anya: Nleba anya dabere na onye nnọchi anya chọrọ ka etinye onye nnọchi anya na nkesa ọ bụla. Nleba anya dabere na onye nnọchi anya dị nchebe karịa ma e jiri ya tụnyere nleba anya na-enweghị ọrụ. Onye ọrụ ahụ na-ejikwa akụkụ nchekwa niile ma na-ejikwa nkwukọrịta niile. Dị ka a na-ahazi ya na ngwa / sistemụ arụmọrụ, ọ dịghị mkpa ka ebuga iwu firewall ọ bụla dị na mpụga. Nlebanya dabere na ndị nnọchi anya na-abịa na ngwọta nleba anya sara mbara yana miri emi.
2. Nye metrik ụzọ: Ọ dị mkpa ịchọpụta metrics dị mkpa ka a nyochaa. Mmadụ kwesịrị ibute metrics ndị na-enyere aka soro sava ndị ahụ wee nye nghọta dị mkpa gbasara omume sava ahụ. Nhọrọ nke metrik dabere n'ụdị akụrụngwa ụlọ ọrụ nwere yana ụdị ọrụ nzukọ a na-eji. Dịka ọmụmaatụ, ihe nkesa ngwa ga-achọ metrics dị ka nnweta nkesa na oge nzaghachi, ebe ngwá ọrụ nlekota maka sava weebụ ga-atụle ike na ọsọ.
3. Tọọ uru ọnụ ụzọ maka metrik: Ozugbo ebutere metrics ụzọ na nyochaa, nzọụkwụ ọzọ kwesịrị ịbụ ịtọ ụkpụrụ ọnụ ụzọ maka otu ihe ahụ. Ekwesịrị ịtọ uru ntọala yana otu oke dịka ụdị metrik ahụ siri dị. Dabere na ụkpụrụ ntọala ndị a, enwere ike nyochaa arụmọrụ nkesa na-abịa.
4. Nchịkọta data na nyocha: A ghaghị ịhazi ngwaọrụ nlekota ihe nkesa ka ọ na-anakọta data na njedebe igwe ojii. Ngwá ọrụ nlekota ihe nkesa na-enyocha ihe omume na-eme n'ofe ihe nkesa site n'enyemaka nke faịlụ ndekọ. Faịlụ ndekọ nwere data gbasara arụmọrụ dara ada yana mmemme onye ọrụ. Ọzọkwa, enwere ike nyochaa metrik dị ka njikọ netwọkụ na arụmọrụ CPU site n'enyemaka nke faịlụ ndekọ. Na mgbakwunye, faịlụ ndekọ na-enyekwa aka chekwaa ihe nkesa ahụ ka ha nwere ozi gbasara mmemme nchekwa.
5. Sistemụ Ntị: Ebe ọ bụ na a na-enyocha ihe nkesa ma na-atụle metrics, nzọụkwụ ọzọ kwesịrị ịdị na-edozi njikere mgbe otu ọnụ ụzọ zutere. Sistemu njikere na-eziga ọkwa na ndị otu nchịkwa mgbe ọ bụla metrik ọ bụla ruru uru ọnụ ụzọ ma ọ bụ ọ bụrụ na mmebi nchekwa ọ bụla.
6. Ịtọlite ​​​​Nzaghachi: Ebe ọ bụ na a na-ama ọkwa admin otu maka ọdịda, ọ bụ oge ime ihe megide ya. Ngwọta nlekota kwesịrị inye aka mee nyocha ihe kpatara mgbọrọgwụ site na data dịnụ ma dozie nsogbu ahụ. Tupu nke ahụ, ekwesịrị ịhazi amụma. Amụma nke na-edobe usoro maka ịzaghachi ọkwa ndị ahụ. Nyochaa ọkwa nchekwa, azịza maka ọdịda arụmọrụ, ụdị ọkwa, omume nzaghachi na mkpa. Ndị a nwere ike ịbụ akụkụ nke amụma mgbe ị na-ahazi usoro aga-eme ihe.
Site na omume ndị a, ndị otu IT nwere ike nyochaa ihe nkesa ahụ wee hụ na azụmahịa dị mma n'ofe ihe nkesa ahụ, ahụmahụ onye ọrụ, ma chekwaa ihe nkesa ahụ site na mmebi data. AIOps, nke Motadata na-enye, ịbụ otu ngwa nleba anya nwere ọgụgụ isi, na-enye azịza nleba anya na teknụzụ dị oke dị ka ọgụgụ isi Artificial na Mmụta igwe. AIOps na-ebu amụma mmejọ ndị nwere ike ime, lelee ahụike nke ihe nkesa, gwa ndị otu nchịkwa, wee nyere aka dozie otu ihe ahụ tupu ha emebie mmebi ọ bụla. Ngwakọta AI na ML na-eme ka ọ bụrụ otu ngwa nleba anya smart nke na-enye otu dashboard jikọtara ọnụ yana wijetị smart yana data ozugbo nke metrik tụrụ. N'ozuzu, ọ dị mkpa iji nyochaa ihe nkesa mgbe azụmahịa gị na azụmahịa gị niile dabere na ahụike nke sava ahụ.